ပိုကောင်းတဲ့ BRIGHTON OR BOURNEMOUTH? - သတင်း
ပိုကောင်းတဲ့ Brighton or Bournemouth?
ငါ့အတွက် Sussex ကိုလျှောက်ရန်ကန ဦး ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ - သင်အလိုရှိပါက Bournemouthian - South Downs နှင့်ကမ်းခြေ၊ ရှုထောင့်အဆုံးမဲ့ညနေခင်းနှင့် Brighton ကိုယ်တိုင်၏ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ မြို့တစ်မြို့အနေနှင့်၎င်းသည်ချစ်စရာကောင်းပြီးကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်အိမ်အသစ်အတွက်ကျွန်ုပ်လိုချင်သည့်အရာအားလုံးရှိသည်။
သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံး၏နှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများကိုကျွန်ုပ်အစဉ်မပြတ်တွေ့နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ဦး စလုံး၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့များဖြစ်သောဘရတ်တန် vs.
Prezzo ဘောက်ချာကိုကျွန်တော်ကြိုက်သလောက် Brighton တော်တော်များများကဒီဟာတွေကို takeaways, quirky caféများနှင့် Instagram ထိုက်တန်စားသောက်ဆိုင်များမှာတွေ့နိုင်သည်။ အာရှ၊ Gastropub၊ Vegan, Italian တို့လိုပဲ Brighton မှာအရာအားလုံးရှိတယ်။ တောင်းပန်ပါတယ် Bournemouth
အဘယ်သူသည် Brighton အတွက် GBK မှမဖြစ်သနည်း
Bournemouth သည်များပြားလှသောကမ်းရိုးတန်းဂုဏ်အသရေရှိပြီး Hengustbury Head ၏ချစ်မြတ်နိုးဖွယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမှအစပိုမိုမြင့်မားသော Sandbanks အထိခရီးသွား offer ည့်သည်များကိုကမ်းလှမ်းရန် Bournemouth တွင်သာယာလှပသောရှုခင်းများရှားပါးလှသည်။
အထင်ကရ Brighton ၏အဓိက
Brighton ကျောက်စရစ်ခဲ၏အားသာချက်ရှိပါတယ်ပေမယ့် - ရဲ့ရိုးသားကြကုန်အံ့, ငါတို့အများစုသည်ကမ်းခြေသို့အမြန်ခရီးစဉ်အပြီးငါတို့ရှိသမျှသည်သဲဖုံးလွှမ်းကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် - Bournemouth အမျိုးမျိုး၏လမ်းအတွက်အများကြီးပိုပေးထားပါတယ်။ ဤသို့ပြောခြင်းအားဖြင့် Brighton ဆိပ်ခံတံတားသည် Bournemouth ဆိပ်ခံတံတား၏အားနည်းချက်ကိုအလွယ်တကူကျော်တက်နိုင်သည်။
Bournemouth အတွက် Hengistbury ဌာနမှူး
ကျွန်ုပ်၏အသေးစားကျောင်းသားဘတ်ဂျက်ကြားမှကျွန်ုပ်သည် Lanes တွင်ကျွန်ုပ်လုပ်သင့်သည်ထက်များစွာပိုသုံးစွဲနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဒီနေရာမှာပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူး၊ Brighton ကလက်ကိုအနိုင်ယူတယ်။ မြင့်မားသော Churchill ရင်ပြင်မှလမ်းကြမ်းများ၌တည်ခင်းbည့်ခံသည့်ဆိုင်ခန်းများနှင့်စပျစ်သီးပြွတ်ဆိုင်များအထိကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်ယူရန်တစ်ရက်အတွက်မစားသင့်သောအရာအတွက်ကျွန်ုပ်အားမေးခွန်းထုတ်စေသည့်အဝတ်အစားတစ်စုံတစ်ရာကိုကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မျှမရှာဖွေမိပါ။ ။
မေမေ meme vs နိုင်
သင်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်နည်းနည်းရှာတွေ့နိုင်တဲ့မရေမတွက်နိုင်သောစျေးဆိုင်တန်းများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော Bournemouth မှာကြီးပြင်းလာပြီး Castlepoint ရဲ့အသစ်အဆန်းကအရာအားလုံးတစ်ခုလုံးနှင့်တူညီသောအခါမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာလျှင်အလွန်လျှင်မြန်စွာပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသည်။ Brighton သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိမည်သည့်နေရာနှင့်မတူသည်မှာတစ်မူထူးခြား။ သီးခြားအရည်အသွေးရှိသည်မှာသေချာသည်။
Sussex မှကျောင်းသားသစ်တစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည် Brighton ၌ရရှိနိုင်သောများပြားလှသောအသင်းများကိုကြောက်ရွံ့နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Arch, Shooshh, Wah Kiki, The Haunt, ညွန့်ပေါင်း ... ငါရက်ပေါင်းများစွာသွားနိုင်ဘူး။ ငါ Brighton Nightlife အပေါ်မျက်နှာပြင်ကုတ်ခြစ်သလိုခံစားရတယ် မကြာသေးမီကပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် Komedia သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးလူရွှင်တော်အမျိုးမျိုးကြည့်ရှုခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုငါးပေါင်ပေးပြီးနောက်တွင် Bournemouth တွင်လည်းထိုကဲ့သို့သောအရာများမရှိပါ။
ငါတောင်ဘားအကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ရရှိနိုင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတ၏အိမ်ရှင်အကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်ကြပြီမဟုတ်။ Bournemouthian တစ်ယောက်အနေနှင့်သင်ဟာချွေးထွက်သောည၊ မီးပွိုင့် Old Oldstation အတွက်ကောင်းသောလမ်း၊ ကျောင်းသားည၊ Toast ကိုသင်နှလုံးထဲ၌အထူးနေရာတစ်နေရာရရှိမည့်ညတွင် Halo နှင့်သာအကန့်အသတ်ရှိနေသည်။ လူတိုင်းနှင့်သူတို့၏မိခင်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာက Bournemouth မှာတူညီတဲ့အရက်ဆိုင်တွေ၊ တေးဂီတနေရာတွေနဲ့ငါတို့ဒီမှာလုပ်တဲ့ကလပ်တွေမရှိဘူး။ Brighton သည် Old Steine ​​မှဆယ်မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်။ သွားနိုင်သည် - Bournemouth ၏စိတ်မကောင်းစရာမြည်းသည်ငယ်ရွယ်သောလမ်းတွင်အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်၏နှလုံးသား၌အထူးနေရာရှိလိမ့်မည်ဆိုပါကကန်နိုင်သည်။
ကောင်းတဲ့အရက်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမျှမျှတတပျံ့နှံ့သွားတယ်။ Boscombe နှင့် Southbourne တို့သည်သောက်စရာကောင်းသောနေရာအချို့ကိုပေးသည် - Chaplin ၏ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးမကြာသေးမီကဗြိတိန်တွင်အကောင်းဆုံးအသိုင်းအဝိုင်းအရက်ဆိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ Boscombe ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသောဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်ဟုထင်သည်။
ငါ Sussex မည်မျှတောက်ပ၏ဘက်လိုက်ပစ္စည်း၏ reams ရေးလိုက်နိုင်ပေမယ့်လူ ဦး ရေအရကျွန်တော်တို့ဟာ Brighton နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Brighton နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သေးငယ်သည့်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ Bournemouth သည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Arts Uni သည်တိုင်းပြည်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ ကြောင်းမျက်နှာစာတွင်, ငါ Bournemouth Brighton နှင့် Sussex အကြားပြိုင်ဆိုင်မှုထက်လိဂ်စားပွဲပေါ်မှာ snobbery ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းအားလုံး rounder ကြောင်းငြင်းခုန်ချင်ပါတယ်။
အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်ကပ်လျက်ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့များဖြစ်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၏ထူးခြားသောတူညီမှုများရှိသော်လည်းငါ Brighton သည်သင်၏ကျောင်းသားနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်ရွေးချယ်ရန် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအငြင်းပွားမှုကိုငါထုတ်ဖော်ပြောကြားလိမ့်မည်။ Bournemouth သည်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ညဥ့်နက်ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်လည်း၎င်းသည်ယူကေတွင်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုမည့်အလှဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် - ငါကမ်းခြေနားမှာနေထိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသစ်အဆန်းတော့မည်မဟုတ်ပါ။